देउवा सरकारले अ’ त्याधिक मात्रामा खुलाए रोजगारी, यसरी दिनुहोस् रो’ जगार आवेदन? यस्तो छ प्रक्रिया – Paluwa Khabar
साउन ६, २०७८ बुधबार 50
बेरोजगारलाई रोजगारी खोज्न सहयोग गर्ने श्रम सूचना बैंक खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आइतबार बैंकको औपचारिक उ’ द्घाटन गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् ल्याएको यस कार्यक्रमलाई मन्त्री रायले कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।
सरकारले बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका श्रम सूचना केन्द्रलाई श्रम बैंकको रुपमा रुपान्तरण गर्ने घो’ षणा गरेको थियो ।
श्रम सूचना बैंक वेरोजगारलाई रोजगारी खोजिदिने नेपाल सरकारको स्वामित्वको एउटा प्लेटफर्म हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अब प्रधानमन्त्री रहन्छन् की रहन्नन् भन्ने कुराको फैसला आजै हुने भएको छ । देउवाले संसदमा आइतवार विश्वासको मत लिने भएका छन् । उनले विश्वासको मत लिन सकेमात्र प्रधानमन्त्रीका रुपमा आगामी निर्वाचन सम्म कार्यकाल रहने छ । अन्यथा फेरी संसद वि’ घटन भएर मुलुक निर्वाचनमा जाने सम्भावना छ ।
Prevटेलिकमका ग्राहकलाई सेयर दिन आवश्यक गृहकार्य शुरू, क-कसले दिन पाउँछन् आवेदन ?
Nextओली पक्षका ७ सांसद थपिए राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग, को बन्दै राष्ट्रपति ?